I-HIBISCUS Suite 2BD/1BA Amanyathelo ukuya eLincoln RD SoBe
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEytan & Ygal
Isanda kunikwa igumbi lokulala eli-2 kwigumbi lokuhlambela eli-1 eSouth Beach.
Ukujonga indawo entsha yendibano yaseMiami elwandle kunye nePavilion. Ibhloko enye kuphela yokuhamba ukuya kwindlela edumileyo yaseLincoln.
Eyona ndawo intle yokuthenga, iindawo zokutyela kunye nobomi basebusuku iMiami Beach kufuneka ibonelele ngemizuzu nje kude.
Ngayo yonke imiboniso emihle efana ne-Art Basel eyaziwayo kwiziko lendibano laseMiami elunxwemeni ngaphesheya kwesitalato.
Ilingana nabantu abayi-5
Ibhedi eyi-Queen e-1
Ibhedi yesofa eyi-1.
Urenta igumbi lokulala eli-2 kwigumbi lokuhlambela eli-1 eSouth Beach.
Ibhedi yesofa eyi-1 epheleleyo.
Ungafumana ezinye zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo, imivalo kunye nokuthenga kwimizuzu nje ukuya kwiLincoln Road.
Ukuza ukubona enye yeeNgqungquthela ezininzi zaseMiami Beach kufuneka zinikeze , Uya kuba ngowokuqala kumgca kule ndlu.
UNGAPAKI KWISAKHIWO IMOTO IZA KUTSHOLWA.
Indlela iLincoln inebala lemiboniso bhanyabhanya elikwinqanaba eliphezulu, igaraji yokupaka iLincoln Road eyaziwa ngokuba yi-1111, iholo yekonsathi yeNew World Centre, iiofisi zeViacom Latin America, kunye neendawo zokuphumla ezingaphezu kwama-200, abarhwebi balapha ekhaya, kuzwelonke. iivenkile, kunye neendawo zokutyela ezilungileyo kunye nemivalo. Indlela iLincoln ikwalikhaya kwiTheatre yaseColony esandula ukubuyiselwa, indawo yemidlalo yeqonga, kunye neArtCenter/South Florida, ingqokelela yezitudiyo kunye neendawo zegalari zamagcisa. Abadlali besitalato basonwabisa umsinga othe rhoqo wabakhenkethi kunye nabemi bendawo eLincoln Road. Iphakathi kwezona ndawo zidumileyo kubakhenkethi kwindawo yaseSouth Beach.
4.60 · Izimvo eziyi-43
I-HIBISCUS Suite ibekwe kwicala elizolileyo le-Meridian Av eSouth Beach eyaziwa ngokuba yiSithili seNdibano yaseMiami Beach.
Ibekwe ngokufanelekileyo ngaphakathi kokuhamba / umgama we-Ubering weendawo eziphambili ukuba uqaphele:
Ukukhankanya nje ezimbalwa zezintandokazi zethu....
Isidlo sakusasa / iindawo zesidlo sasemini
-Ihotele eqhelekileyo kunye neBar (iimbono ezinkulu zolwandle)
- Ngcamla kwiBakery
- Bodega Taco joint
- Umnqathe Express
- Sunset Juice Cafe
-Ikhitshi elimnandi elikrwada kunye nebar yeJuice
-MILA $$$$ (rsvp kwangaphambili)
- Ceviche 105 $ $
- Phantsi $$$
- Inyoka enxilileyo $$$
-Itheyibhile yaseYardbird yaseMazantsi kunye neBar $$$
- Sushi Garage $$$
- NaiYara Thai $$$
- uLucali Pizza $$
Ibha & Ubomi basebusuku
- Stiltsville Fish Bar
- Bodega Lounge
Thenga ude ufike eLincoln Rd
- BONKE ABANGCWELE
- Iimpahla zasezidolophini
Kuhlala kukho into yokwenza eSouth Beach ayisoze ibe ngumzuzu otyhafileyo !!
Abakhenkethi abandwendwela i-Miami Beach kudala bequqa kwi-Lincoln Road Mall, ibhlokhi esibhozo, elungele abahambi ngeenyawo ukusuka kwi-Alton Road ukuya kwi-Washington Avenue. Ngaphezulu kweendawo zokutyela ezingama-350, iivenkile, iigalari, iibhari, iindawo zenkcubeko—singasathethi ke ngokungenasiphelo kwamathuba okubukela abantu—kunzima ukuba ungafumani nto yokukugcina uxakekile apha.
Ifakwe kumbindi weSouth Beach, iZiko leNgqungquthela yaseMiami Beach (MBCC) esanda kulungiswa liziko eliqaqambileyo, elikwinqanaba eliphezulu - njengento entsha njengoko intle. Yindawo ekuya kuyo ngokwayo-indawo edlamkileyo yomsebenzi onamandla kunye nemincili yomoya wetropikhi yaseMiami Beach.
Umbuki zindwendwe ngu- Eytan & Ygal
Izimvo eziyi-1 775
Ndiyafumaneka ngeMiyalezo ka-Airbnb
UEytan & Ygal yi-Superhost
Inombolo yomthetho: BTR007033-07-2019, 2211811